ပိရမစ်များ၏စွမ်းအင်လျှို့ဝှက်ချက်များ - Afrikhepri Fondation
Lပိရမစ်တွင်စွမ်းအင်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသလား။ ဤသည် esotericism ၏များစွာသောဖတ်စာအုပ်များတွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။ ရှေးခေတ်ကတည်းက၎င်းသည်ခွန်အားနှင့်မျှတမှုကြားရှိအဝေးဆုံးသောဆက်နွယ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည်ရှေးဟောင်းများသည်စကြာ ၀ ofာ၏အခြေခံနိယာမများကိုသိရှိပြီးသိမ်မွေ့သောစွမ်းအင်လောကသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးတွင်အသုံးပြုမှုသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှစ်ခုရှိသည်။ အီဂျစ်နှင့်တရုတ်တို့တွင်တွေ့ရသောရိုးရာပုံစံသည်အထူးသဖြင့်အမေရိကအလယ်ပိုင်းနှင့်တောင်အမေရိကတွင်သိသိသာသာကျဆင်းနေသည့်ကွေးပိရမစ်ကိုဆန့်ကျင်သည်။
Dowsing (သို့သော်လည်း kinesiology) ကစွမ်းအင်အဆင့်မှာပိရမစ်အားဖြင့်ကစားအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍတငျပွနိုငျ။ ဤကိစ္စတွင်မျှစံတူရိယာများကတိုင်းတာလူသိများစွမ်းအင်, ဒါပေမယ့် dowsing သို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သူတို့ရှိသည်သက်ရောက်မှုဖြင့်သို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမရနိုင်ကြောင်းသိမ်မွေ့စွမ်းအင်ရှိပါတယ် သတ္တဝါ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှု (ပွင့်လင်းနှစ်ဖက်နှင့်အတူသာဖွဲ့စည်းပုံကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ပစ္စည်းများနှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်အဆောက်အဦများနှင့်အစိုင်အခဲနံရံများနှင့်အတူ) ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများမော်ဒယ်များနှင့်အတူဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ရလဒ်အခါတိုင်းပြန်လုပ်နှင့်တူညီကြသည်။ အဆိုပါပိရမစ်ကပတ်ဝန်းကျင်အတွက် positioned ဘယ်လိုပေါ် မူတည်. ထိုကဲ့သို့သောအစွမ်းထက် un'accumulateur သို့မဟုတ်ဒိုင်းလွှားအဖြစ်အသံချဲ့စက်, အဖြစ်စွမ်းအင်လေးစားမှု၌တည်ရှိ၏။
အဆိုပါ microvibratoire ရူပဗေဒပိရမစ်လှိုင်းတံပိုးကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါကြောင်းကရှင်းပြသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းရန် (ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပါ: လှိုင်းတံပိုးတို့သည်ပုံပျက်နေသော) နှင့်လူနေမှုကိစ္စများအတွက်သိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးဤဖြစ်ရပ်ဆန်းပိရမစ်ကိုကိုးကားအဖြစ် Cardinal မှတ်ယူပြီးတစ်ဦးအခြို့သောပုံစံအတွက် positioned သောအခါပေါ်လာသည်။
ဒါက waveforms အဆုံးစွန်သော "အသိ" ကဖမ်းမိခြင်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ reissued သော object တစ်ခုနှင့်မြေကြီးမယ့်သံလိုက်စက်ကွင်းများ၏ဂျီဩမေတြီဖွဲ့စည်းပုံ, အကြားအပြန်အလှန်၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ ။ အကျော်ကြားဆုံးပိရမစ်, (ben ben ခေါ်) ၎င်း၏အထက်ပိုင်းအတွက်ရှိကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် (Joser ၏ပိရမစ်ကိုကြည့်ပါ) ဖွံ့ဖြိုးရေးကာလပြီးနောက်ဂန္ pyramidion ဖာအဲဂုတ္တုပြည်၌ထက်ပိုမိုခြောက်ဆယ်ကြိမ်ပြန်ထုတ်ပေး။
ကလေး Cardinal အချက်များရင်ဆိုင်နေရတဲ့လေးနှစ်ဖက်နှင့်အတူနေရာချထားသည်ဆိုပါက waveforms transmit နှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းရှိသမျှသောစွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်မှုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါဘူး။
ဤသည်က geopathic node ကိုအနုတ်လက္ခဏာ Impulses သတင်းပို့ကျော်ထားရှိလျှင်ပိတ်ထားသည်နှင့်ထွက်မလာပါဘူးဆိုလိုသည်။
Khufu ၏ပိရမစ်အတွင်းကောက်ယူ dowsers စစ်တမ်းများ (နှင့်အမျိုးအစားတူ၏အခြားပိရမစ်အတွက်) ထိုသို့သောဟင်းကွန်ယက်နှင့် Hartmann ၏အဖြစ်ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းစွမ်းအင်ကွန်ရက်များ, ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား ပိရမစ်အတွင်းပိုင်းကိုတင်ပြဘူး။ ပိရမစ်၏ဤအမျိုးအစားတစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားသောတိမ်းညွတ်, သို့သော်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအမျိုးအစားထုတ်လွှတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
1) နောက်ထပ်ကြောင်းအတွက်မျက်နှာများအဆိုပါ Cardinal အချက်များမှလှည့်လေ၏
2) ကပိရမစ်လေးပါးကို Cardinal အချက်များမှခြေရင်းကနေစတုရန်း၏ထိပ်နှင့်အတူ oriented စေခြင်းငှါ: ဤအမှု၌လှိုင်းတံပိုး၏သဏ္ဍာန်ရှိသော်လည်းမှာစွမ်းအင်ပစ္စုပ္ပန်၏ဘာပဲအမျိုးအစားရှိလိမ့်မည် (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) ကိုပိရမစ်အတွင်းရှိအပြင်ဘက်မှအခမဲ့ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်; 3) ကပိရမစ်သည်ယခင်နှစ်ဦးကိုဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ offset ဖြစ်ပါတယ်: ကစွမ်းအင်ကဖြန့်ချိ (သို့မဟုတ်ပါကဘယ်မှာနေရာချထားခြင်းမဟုတ်သာ) ပုံမှန်အားဖြင့်လည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်များ၏အနုတ်လက္ခဏာပုံစံကိုလှိုင်းတံပိုးဖြာထုတ်လွှတ်ပေးပါသည်။
အမေရိကအလယ်ပိုင်း (Aztec ယဉ်ကျေးမှု) သို့မဟုတ် South ၏ခြင်းကိုပိရမစ် feature ကိုပိရမစ်ကြီးအဆောက်အဦများ, သို့ဖြစ်. အဘယ်သူမျှမ type ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဘဲ, အလေး Cardinal အချက်များဆီသို့ oriented ခြေရင်း၏ vertices နှင့်အတူနေရာချထားရိုးရာပိရမစ်ကဲ့သို့တူညီသော features တွေတင်ဆက် စွမ်းအင်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အဲဒါကိုအတွက် upwardly စွမ်းအင်ပစ္စုပ္ပန်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါ။
ဒါဟာအမေရိကအလယ်ပိုင်း၏ပိရမစ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်ထိပ်မှာနေရာချကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်မှာလူသားတွေ (ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် Aztecs ထောင်ပေါင်းများစွာ၏) ယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ သို့သော်ခြင်းကိုပိရမစ်ယေဘုယျအားဖြင့်ယဇ်ပူဇော်သားကောင်များကိုတွေ့သောစွမ်းအင်ကိုစုဆောင်းရန်စွမ်းရည် (ဥပမာgéotelluriqueပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်ထံမှ) အခြေခံနှင့်အထက်သို့ထုတ်လုပ်တဲ့ရှိပါတယ်။ သားကောင်များနေဆဲရှင်းလင်းသောနေစဉ်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ယဇ်ပုရောဟိတ်ယေဘုယျအား polarity ကသည်နှင့်အညီရွေးချယ်ထားသည့် ((သူတို့တစ်တွေရန်လိုပတ်ဝန်းကျင်ဆန့်ကျင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရန်ရှိသည်) (သူတို့ကအရပျ၏စွမ်းအင်နှင့်အတူအပြုသဘောအပြန်အလှန်အတွက်လာ) လုံးဝကိုယ်လုံးတီးကိုယ်စားပြုအကြီးအကျယ်အင်္ကျီဖြစ်ပါတယ်နေကြတယ် ) သင့်လျော်သော။ ယဇျပူဇျောလွှတ်ပေးစွမ်းအင်နှင့်ဆန့်ကျင်၏ကြားနေသေချာစေရန်, ထိပ်ကနေအောက်ခြေအထိအပျက်သဘောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စုဆောင်း Impulses သတင်းပို့နှင့် upwardly projected နှင့်ပြန်ပြောပြစွမ်းအင် field ရဲ့အပြုသဘော Impulses သတင်းပို့အကြားဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စွမ်းအင်တိုးတက်မှုများ။
ဒေါက်တာဖိလိပ္ပုသည် Callahan အဆိုအရ, ပန်းရောင်ကျောက် - မဟာပိရမစ်များ၏ရှင်ဘုရင်၏နန်းတော်များဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုထားပြီး - အရှိဆုံး paramagnetic တ္ထုများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူမဟာပိရမစ်ဖုံးလွှမ်းသောထုံးကြောကျတိုင်းတာ diamagnetic ဖြစ်၏။ " ပစ္စည်း diamagnetic ဖြစ်ပါသည်: သုညဖြစ်ပါတယ် Paramagnetic ကြောင့်စွဲလန်းနှစ်သက်ထားတဲ့အတွက်သံလိုက်စက်ကွင်းကဲ့သို့တူညီသောဦးတည်ချက်အတွက်သံလိုက်ရရှိသည်သောပစ္စည်းဥစ္စာများကဆိုပါတယ်, ဒါပေမယ့် champ.Si ထဲကသံလိုက်ယခုအချိန်တွင်ယူသည့်အခါဤသံလိုက်ရှုံးသည်။ ပြင်ပသံလိုက်စက်ကွင်းမှအကြောင်းမဲ့တဲ့အခါမှာ, တကသံလိုက်စက်ကွင်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အားနည်းစွာဓာတ်ပြုပါသည် (ဒီကြောင့်အီလက်ထရွန်မိုဃ်းတိမ်ပုံပျက်သောရန်ဖြစ်ပါသည်) ထိုကန်တော့ချွန်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ပိရမစ်ပုံသဏ္ဍာန်မကြာခဏစွမ်းအင်ညီမျှသောအဖြစ်မှတ်နေကြတယ် ။ နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးလှည့်ဖျားကိုလယ်အထွတ် generate ဆိုသည်။
ဒီနေရာတွင်စွမ်းအင်ထဲကပိရမစ်ထိပ်ကနေနှစ်ဆ helix ၏ Kirlian ဘွေဖေါ်ပြခြင်းဓာတ်ပုံကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
မာရိကဒဏ္ဍာရီနှင့်ဒင်း Hardy Allegan မီချီဂန်။
Hardys သည်ရွှေဒင်္ဂါးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးဘုရင်၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ဘ ၀ ပုံစံအရွယ်ကြီးမားသည့်ပိရမစ်ကြီးကိုဆွဲချခဲ့သည်။ ခဏအကြာတွင်ရွှေဒင်္ဂါးသည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်“ ရေနံကျဆင်းမှု” ကိုပြသခဲ့သည်။ အခြားစမ်းသပ်သူတစ် ဦး သည်ဤစမ်းသပ်မှုကိုအခြားပိရမစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် ဤစမ်းသပ်မှုသည်ဒေါက်တာဒီနယ်လ်ဆင်၏လုပ်ငန်းကို ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှပဲ့တင်ထပ်သည်။
အဆိုပါတက်စလာကွိုင်သို့မဟုတ်တက်စလာကွိုင်ဘုရင်ရဲ့ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာနေရာချနေပါတယ်။ ဒါဟာပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု coupled နှစ်ခုသို့မဟုတ်တခါတရံတွင်သုံးလျှပ်စစ် circuits များပါဝင်ပါသည်။ ဤသည်ယန္တရား 1891 န်းကျင် serbe- américaino-အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင် Nikola Tesla ကစတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာယေဘုယျအနေနဲ့လျှပ်စစ်အလွန်မြင့်မားဗို့အား၏လက်ရှိနိမ့်နှင့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း Alternative လက်ရှိထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
Joshua Gulick ကပိရမစ်သည်ဓာတုဗေဒပညာရှင်များ၏“ လျှို့ဝှက်မီး” ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ သူသည်ဤလျှို့ဝှက်မီးကိုအသုံးပြုပြီးသတ္တုရွှေများကို alchemical of gold တွင်ပျော်ဝင်စေပြီး၊ ဒီရွှေဆီကို ဦး စွာအဖြူရောင်အမှုန့်၊ ထို့နောက်အနီရောင်အမှုန့်ခြောက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။ ဤရွှေထုတ်ကုန်များကို Alchemical စာပေတွင် Philosopher's Stone ဆီသို့ ဦး တည်သောခြေလှမ်းများအဖြစ်ကောင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ ယောရှု၏အဆိုအရ“ Alchemy ၏ကြီးမားသောလျှို့ဝှက်ချက်မှာ 'လျှို့ဝှက်မီး' ဟုခေါ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရွှေကိုအဖြူရောင်အမှုန့်အဖြစ်သို့ပျော်ဝင်စေသည်။ ဒါဟာဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလူ့အပြန်အလှန်မပါဘဲဤ "မီး" ဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင်လုပ်ငန်းစဉ်သည်“ ကလေးကစားခြင်း” ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ ရွှေကိုပျော်ဝင်စေသောလျှို့ဝှက်ချက်မှာပိရမစ်ပုံသဏ္byာန်မှထုတ်လွှတ်သောစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ “ ပိရမစ်” ဟူသောစကားလုံးကို“ အလယ်၌မီး” ဟုဘာသာပြန်ထားသည်။ "
ရှစ်ပေမြင့်သောပိရမစ်အလယ်တွင်ဆိုင်းငံ့ထားသောရွှေဒင်္ဂါးတစ်လုံးနှင့်ပိရမစ်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သောကြေးနီပြွန်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုငါအသုံးပြုခဲ့သည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်အဖြူရောင်အမှုန့်သို့ခြောက်နေသောအရည်ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ အခန်းသည်လေထုအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆနိမ့်သောကြောင့်၎င်းသည်ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုမဟုတ်ပါ။ ငါအစိတ်အပိုင်းကိုသန့်ရှင်းစင်နှင့်အရည် / အမှုန့်ပြန်ပေါ်လာ။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အစီရင်ခံထားသည့်ရွှေပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လေ့လာခဲ့သောကျမ်းများ၌ထင်ရှားစွာဖော်ပြခြင်းမရှိသောဖြစ်စဉ်၏ပထမအဆင့်နှင့်အတော်လေးတသမတ်တည်းဖြစ်သည်။ "
သည်အခြားစာရေးဆရာများအဆိုအရကပိရမစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးစဉ်အတွင်းသောကျောက်လုပ်ကွက် levitate ရန်အသုံးပြုခဲ့သည့်စွမ်းအင်၏ဤပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
"ပိရမစ်စွမ်းအင်" စာအုပ်၏စာရေးသူအဆိုအရအထက်ပါဓာတ်ပုံသည်ပိရမစ်များတည်ဆောက်ရာတွင်အသုံးပြုသောကျောက်တုံးကျောက်တုံးများကိုထုတ်ယူရန် Caduceus Coil ဟုခေါ်သည့်ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ solitron ဟုခေါ်သောဆားကစ်တစ်လိုင်းသည်လိမ်ရေဝဲကိုဖန်တီးပြီးကွိုင်မီးစက်များဖြင့်လည်ပတ်စေသည်။
ကျောက်တုံးများခဲယဉ်းစေသော vortex အကြားရှိအင်တင်နာနှစ်ခု
ဒီကွိုင်တွေသုံးပြီးအီဂျစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်တွေ၊ passive (ဘယ်ဘက်) နဲ့တက်ကြွ (ညာဘက်မှာ) ။ တက်ကြွသောကွိုင်သည်“ မြင့်မြတ်သောနေရာများ” တွင်ကမ္ဘာမြေနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးဂြိုဟ်စွမ်းအင်ကွန်ယက်တွင်၎င်း၏အရင်းအမြစ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤလုပ်ရပ်ကိုပုံတူပွား။ မရသည့်အကြောင်းပြချက်မှာရိုးရှင်းပါသည်၊ အကြောင်းမှာ“ သူတို့သည်ကမ္ဘာမြေ၏လျှပ်စစ်သံလိုက်ဇယားကွက်ဟုခေါ်သည့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကိုမလေ့လာခဲ့ကြပါ။ Hardy & Killick ကအသေးစိတ်ရှင်းပြပါ။
"ရှေးဟောင်းကမ္ဘာတဝှမ်း levitation နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအောင်မြင်ရန်ဒီကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်ပိရမစ်များကိုတွေ့ရှိရသည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံရှိ Khufu ပိရမစ်သည်ကွိုင်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးကမ္ဘာ၏ဇယားကွက်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤဇယားကွက်အတွက်အဓိကထိန်းချုပ်နေရာမှာပArkိညာဉ်သေတ္တာတော်ဖြစ်သည်။ "[Hardy & Killick, ပိရမစ်စွမ်းအင်၊ p ။ ၁၆၅ စ။ [စာမျက်နှာ ၁၆၉ ပါရုပ်ပုံ]
ဘယ်လိုရိုးရှင်းကတ်ထူပြားပိရမစ်တစ်ခုအသုံးပြုသင်တုန်းဓါးထက်မြက်ကြောင်းဖြစ်သနည်း သို့မဟုတ်အတွင်းနေရာချအသားတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း mummify မှစီမံခန့်ခွဲ? အဘယ်ကြောင့်အချို့သော volumes ကိုသူတို့မသိသောမူရင်းစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်သေးတိုင်းတာ? ဤ "waveforms" ၏စကားဝှဖြစ်ပြီး, ထိုအရပ်၌ပေါ်ပေါက်စပ်စုဖြစ်ရပ်တာဝန်ရှိပုံရသည်။ သိပ္ပံယဉ်ကျေးမှု၏ရှေးဖြစ်နိုင်သည်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအချို့သောရှင်းပြမယ်လို့ ... ဖိုလ်ဒါထဲမှာ n "91304, ပရာ့ဂ်၏တီထွင်မှုများ၏ရုံး, အလွန်ပုံမှန်မဟုတ်သောကိရိယာ၏ဖော်ပြချက်လည်းမရှိတစ်ဦးကလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် prosaically သင်တုန်းဓါးသွားဘို့အချွန်သုံးစွဲဖို့တန်ဆာအဖြစ်မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါစနစ်အားအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးတို့က 1959 မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကြောင့်အမျိုးသားရေးရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်၏ဖန်တီးမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်သည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်, ကြောင့်ကောင်းစွာအဲဒီနေ့ကအတွက်မသိ, Karel Drbal အမည်ရှိ။ အဆိုပါချွန် 23,40 မြင့်မား 15 အပေါ် 10 စင်တီမီတာစတုရန်းတိုင်းတာသောကတ်ထူပြားသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ပိရမစ်အဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။ ဒါဟာဖြုတ်တစ်စတုရန်းအခြေစိုက်စခန်း, ပါဝင်သည်။ သောကခေါင်းလောင်းများကဲ့သို့နေရာချနေပါတယ်။ ဒီအခြေခံပေါ်မှာပျမ်းမျှရေးဆွဲလျက်, သူတို့လမ်းဆုံသေးငယ်တဲ့ cuboid တစ် matchbox ၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်နေကြသည်။ ဒါဟာအဆုံးစွန်၏အတိုင်းအတာထိပ်တန်းပေမယ်သို့သော်သူတို့ 6.50 စင်တီမီတာမြင့်သောထက်မပိုသင့်တယ်မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့5စင်တီမီတာ။ သောပိရမစ်၏တတိယဖြစ်ပါတယ်။
စနစ်အသုံးပြုရန်။ မင်းကသံလိုက်အိမ်မြှောင်လိုတယ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိရမစ်ကိုအရှေ့တိုင်းတောင်ဘက်ဝင်ရိုးသို့အတိအကျရောက်စေရန်အတွက် Oriental ကို ဦး တည်ထားသည်။ လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်သံလိုက်ကိရိယာများမှအကွာအဝေးတစ်ခုတွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မှောင်နေသောသင်တုန်းဓါးသည်အရှေ့ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်သို့မျက်နှာမူထားသည့် ၂ လက်မအကျယ်အ ၀ န်းရှိတံတိုင်းပေါ်တွင်ရှိသည်။ ပိရမစ်ကိုဆလိုက်အထက်တွင် ထား၍ ခြောက်ရက်စောင့်ပါ။ ဓါးသည်ချွန်ထက်သည်။ Drbal သည်အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်ဂရုစိုက်သည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုပိရမစ်အောက်တွင်တူညီသောအနေအထားပြန်ထားရန်လုံလောက်သည်။ ဘယ်အံ့ is စရာပါလဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကအယူအဆတစ်ခုပဲ။ ချက်အင်ဂျင်နီယာကပြောပါတယ် သို့သော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်နေသောမည်သည့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသည်အာကာသ၏ပုံသဏ္accordingာန်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားပုံရသည် - အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကျနော်တို့ကလုံးဝလျစ်လျူရှု သို့သော်ဤကိစ္စတွင်သင့်လျော်သောပုံစံများ၊ ပိရမစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှေးကွေးစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ပိရမစ်? အထူးသဖြင့်အီဂျစ်ပြည်ရှိဖာရိုရှော့ရှ်၏အတိုင်းအတာအရပရာ့ချ်ထက်သောချွန်စက်၏အဖြစ်တွင်?
ကျိုးနွံစွာ, Drbal, သူ့စာအုပ် '၌။ မဝန်ခံပါနဲ့ လုံးဝရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏မူလအစမှာဖြစ်။ သူကပြောပါတယ်, ငါးဆယ်အစောပိုင်း။ ပြင်သစ်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တစ် ဦး ဖြစ်သူ Mr. Bovis သည်အီဂျစ်ပိရမစ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ သေမင်းအခန်းထဲကအချက်တစ်ချက်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားစေသည်။ အဲဒီမှာစိုထိုင်းဆကြီးပေမယ့်သေးကြောင်၏အလောင်းကောင်။ အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်ကြွက်များ၊ သူတို့ပကတိ mummified, ပုပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သင်္ချိုင်းဂူ၏ဗိသုကာပညာသည်ထိုဖြစ်ရပ်နှင့်မသက်ဆိုင်ဟုဘိုဗစ်ကတွေးမိသည်။ အီဂျစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည်သဘာဝပစ္စည်းများကိုပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့သောအချို့သောပစ္စည်းများ၊ ပုံစံများသို့မဟုတ်အင်အားအချို့၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုကျွန်ုပ်တို့သံသယမထားနိုင်ကြောင်းသိထားသည်မှာသံသယရှိသည်။
ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအချို့၏ရုပ်ထု၊ ဗိသုကာနှင့်ဂရပ်ဖစ်များအားလုံးသည်အင်အားထုတ်လွှတ်မှုဥပဒေများအားလိုက်နာသည်ဟု Enel နှင့်သူကိုယ်တိုင်နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ လိုင်းများ၊ အသံအတိုးအကျယ်များ၊ အဆင်အပြင်များ၊ ဦး တည်ရာ…အရာအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဟန်ချက်ညီစေရန်၊ အချို့သောနေရာများနှင့်အခွင့်ထူးခံအမျိုးသားများအတွက်စုံလင်သောပေါင်းစည်းမှုကိုဖန်တီးရန်တွက်ချက်သည်။ ပျောက်ဆုံးသွားသောသို့မဟုတ်တမင်တကာဝှက်ထားသောသိပ္ပံပညာ? သိပ္ပံပညာတစ်ခုလော၊ မှော်အတတ်ရှိသော်လည်းသူတို့တစ်နေရာရာသို့အတူတကွမလာကြသလော လွန်ခဲ့သောနှစ်၏အမြင့်မြတ်ဆုံးသောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ၏ရွှေရောင်နံပါတ်ကိုမည်သူပေးမည်နည်း။ သင်္ချာပညာရှင် Ravatin နှင့်သူ၏သုတေသနအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Ark'All အုပ်စုသည်ထိုသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိပ္ပံပညာမှထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအရာများ မှလွဲ၍ စဉ်ဆက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မကိုက်ညီပါကတွေးမိသည်။ ပုံစံများကြောင့်စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်ဆိုဗီယက် parapsychologist Sergeyev ကနိဂုံးချုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်နှင့်နျူကလီးယားစွမ်းအင်များထက်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိသည်ဆိုပါက၊ ဒီအသိပညာ ... ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းအကြောင်းပြချက်ဆက်ဆက်ရှိပါတယ်။ အရာအားလုံးရှိလင့်ကစားနေ့စဉ်လှိုင်းတံပိုးများကိုဤပုံစံကိုသုံးနိုင်သလား။
Dr. Serge V King သည်ပိရမစ်များနှင့်အထူးခြားဆုံးဖြစ်စေပုံသဏ္orာန်လှိုင်းများကိုထုတ်လွှတ်နိုင်သည့်အခြားအဆောက်အအုံများတွင်အကြီးမားဆုံးသောအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အခြားနေရာများထက် Onan ကိစ္စတွင်အိမ်ခြံမြေအကျိုးစီးပွားမရှိခြင်း။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ထို့ကြောင့်သာသိပ္ပံနည်းကျဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်သူသည်သူ၏စာအုပ် Pyramidal Energy Book (ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်“ Pyramidal Energy Book”) ကိုနိဒါန်းတွင်ပိရမစ်ပြီးမြောက်နိုင်မည့်အရာများစာရင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။ အမိန့်သည် ဦး စားပေးမဟုတ် (စာရင်းကိုမပြည့်စုံပါ):
SOURCE မှ: http://www.neotrouve.com/?p=133
အသက်၏ပန်းပွင့်၏ရှေးဟောင်းလျှို့ဝှက်ချက်၊ အတွဲ ၂
€ 16,99 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 30, 2021 4:50 pm တွင် updated
စိတ်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း - ခရစ္စတုန်းအန်ဒရေ (အသံ)
Dr Aka Félixမှရှင်းပြထားသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၏မှော် (ဗီဒီယို)
ဘုရားသခင်တစ်ပါး၊ ဘာသာသုံးခု (ဗီဒီယို)